SERVO-720 Automatic Servo Cup Manao Machine - China Guangdong Jinxin milina
Cup Manao Machine
Vacuum fiforonana Machine
Mameno Ary famehezana Machine
Tavoahangy Blowing Machine
YB Series Curved offset tena toetrany Pirinty natao tamin'ny Machine
XC Full Automatic haingam-pandeha Vacuum Izaho Jehovah no manao Machine
SERVO-720 Automatic Servo Cup Manao Machine
Port: Ningbo na Shanghai Port
Type / masontsivana SERVO-720
Available Material PP, PE, PET, andilany, GPPS
Namorona Area (MG) 720 × 450
Namorona Lalina (MG) 180
Namorona Speed ​​(tsingerina / min) 20-35
Max. Sakany (MG) 720
Hateviny (MG) 0.3-2.0
Herin'ny The manontolo Machine (KW) ≤ 55
Air Wastage (Mpa) 0.6-0.8
Rano Wastage (m3 / h) ≤ 0,5
Lafiny (MG) 6200 × 2800 × 2600
Thermoforming nampirina entana fitoeran-javatra toy ny kaopy, boaty sy ny lovia famafazana. Toy ny ronono kaopy, kapoaka Jelly, gilasy kaopy, iray-eny kaopy, vilia baolina paty avy hatrany, sakafo haingana boaty sy ny sisa.
Mampiasa milina 1.The-tsangana rafitra efatra, miaraka amin'ny malamalama fandidiana, feo ambany, mahery clamping hery sy ny sisa.
2.Mechanical sy ny herinaratra, entona fampidirana, avo-fametrahana mazava tsara servo handefa ny taratasy, servo miezaka, plc servo mihetsika fanaraha-maso, ny hafanana fanaraha-maso ny rafitra fanaraha-maso Module manan-tsaina.
3.A ambony ny automatique, famokarana hafainganam-pandeha. Amin'ny alalan'ny fametrahana ny lasitra samihafa afaka mamokatra vokatra isan-karazany, mba hahatratra ny tanjon 'ny maro fampiasana milina.
4.By mampiasa marika-dehibe anarana herinaratra votoatiny, pneumatic singa, mba hahazoana antoka mafy orina fandidiana, azo antoka tsara, ela velona fanompoana.
5. Ny rafitra rehetra dia voalamina tsara, ny tsindry, koronosy, fanapahana, hihena, vokatra asa hafa mitsoka ary napetraka tao amin'ny lasitra, ka ny vokatra dia fohy dingana, vita kilasy ambony, mifanaraka amin'ny fenitra ara-pahasalamana-pirenena.
6.The milina dia mety ho ny famokarana PP, PE, PET, andilany, GPPS sy ireo taratasy plastika vokatra. Toy ny kaopy, siny, kaopy sy ireo kaontenera manify-misy manda, toy ny ronono kaopy, Jelly kaopy, gilasy kaopy, fanary misotro kaopy, vilia baolina paty avy hatrany, boaty ny sakafo sy ny sisa.
Previous: HPC -860 Automatic hydraulic Cup Manao Machine
Manaraka: WJ Series avoaky Plastic Sheet Extruder
Automatic Cup Manao Machine
Automatic Plastika Cup Manao Machine
Cup Izaho Jehovah no manao Fitaovana
fanary Cup Manao Machine
Mateza Cup Manao Machine
tanteraka Automatic Cup Manao Machine
hydraulic Cup Manao Machine
Pet Cup Manao Machine
Plastic Cup Manao Machine
Plastic Cup Manao milina
p Cup Manao Machine
Small plastika Cup Manao Machine
HPC -860 Automatic hydraulic Cup Manao Machine
HPC-720 Automatic hydraulic Machine Fa tavim-boninkazo
ASPII110 / RCX700 fampidirana ny Sheet Extrusion ...
RCX-700 Automatic Jery mitongilana-bobongolo Cup Manao Machine
Ampiana hoe: JINXIN Industrial Zone, HuaXinCheng, ChaoShan Road, Shantou City, Province Guangdong, Sina